Latest Winklevoss rahalahy' crypto patanty manarona ny fiarovana nomerika raharaham-barotra - Blockchain News
Latest Winklevoss rahalahy’ crypto patanty manarona ny fiarovana nomerika raharaham-barotra
A orinasa nanana ny Cameron sy Tyler Winklevoss, mpanorina ny Gemini cryptocurrency fifanakalozana, nomena ny patanty ho an'ny rafitra iray izay mikendry ny hanatsarana ny fiarovana ny nomerika fifanakalozana.
Ny fampiharana dia fitoriana tamin'ny volana Novambra, ary nomena tamin'ny Talata ny U.S. Patanty sy ny famantarana Office (USPTO). Izany dia mamaritra ny “rafitra, fomba, ary ny fandaharana fanodinana vokatra ho an'ny tsy manana ahiahy ao anatin'ny rahona varotra rafitra computing,” amin'ny Andrew Laucius, Cem Payá sy Eric Winer atao hoe toy ny mpamoron-tsain (na ny Winklevosses dia tafiditra ao amin'ny lisitra).
Mampiasa ity tontolo ity ny fitambaran'ny iraisana cryptographic teknika, anisan'izany ny asa sy ny hasi nomerika sonia. Tarehimarika tafiditra tao ny fampiharana hazavao fa ny rafitra dia natao mba hanome fiarovana eo amin'ny rahona-monina Hafanàm-po an-pananana fifanakalozana.
Steven Seagal lasa ny Masoivoho ny ICO "bitcoin taranaka faharoa."
"The Hollywood kintana ...
Previous Post:Samsung izao manao ASIC poti for cryptocurrency fitrandrahana
Next Post:Baidu nandefa blockchain-monina tahiry sary sehatra